Top European Train Tours You Shouldn't Miss | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > शीर्ष युरोपेली ट्रेन यात्रा तपाईं मिस हुँदैन
कहीं यात्रा सधैं अचम्मको छ र हामी यसलाई सुन्दर शहर पत्ता लगाउन के, एक देश वा संस्कृतिका इतिहास हाम्रो बाट धेरै फरक. तथापि, तपाईं घर टाढा जाने छैन सुन्दर ठाउँहरू खोज्न. त्यहाँ केही युरोपेली रेल पक्कै हाम्रो यात्रु इच्छा सूची मा एक ठाउँ योग्य भनेर एक अद्वितीय आकर्षण संग पर्यटन हो. बाट आकर्षक धनी इतिहासहरू र सांस्कृतिक प्रभाव संग क्यापिटल गर्न युरोपेली सहर, जो शहर भ्रमण गर्न पत्ता लगाउन समय लाग्न.
यहाँ केही युरोपेली रेल पर्यटन तपाईं सम्झना हुँदैन छन्:
हामी एक सानो न्यानो देशमा जान, विशेष, को बास्क देश को सुन्दर क्षेत्रमा. यहाँ हामी संस्कृति को दोस्रो युरोपेली राजधानी थियो के फेला 2016: सनसेबास्टियन. उत्तरी तट मा स्थित यो सुन्दर शहर सधैं को लागि दुनिया चार्ट tops यसको मासु प्रस्ताव र यसको जीवंत nightlife. अर्कोतर्फ, सर्फिङ, दल र तनावमुक्त वातावरणले तपाईंलाई प्रेम पर्नु हुनेछ केहि हो. यो साधारण छ पाउन घटनाहरू कला बारे, संगीत, र शहर को सबै कुनामा मा नृत्य. त्यसैले, it is one of the greatest in स्पेन र हाम्रो युरोपेली रेल पर्यटन को भाग भ्रमण गर्न र यसको सबै भन्दा राम्रो ठाउँ खोजी दिन खर्च र एक स्वादिष्ट खाने र ककटेल समुद्र द्वारा संग साँझ समाप्त.
को हृदयमा जर्मनी, बर्लिन देखि एक घण्टा बारेमा, तपाईं सम्झना हुँदैन अर्को शहर हो. लिपजिग झन् राजधानी सबैभन्दा आधुनिक र कारगर वैकल्पिक रूपमा उदीयमान छ. सायद यो किनभने को छ यसको शानदार इतिहास, बाख र वाग्नर जस्तै नाम लिङ्क; वा, सायद, यसको ठूलो हरियो रिक्त स्थान को लागि, अझै speculative हात कब्जा गर्न. यो पनि यसको शान्त प्राण लागि हुन सक्छ, जहाँ कला र संगीत असाधारण छन्. जहाँसम्म भव्य युरोपेली रेल पर्यटन जाने, यो एक पक्कै पनि यसलाई लायक छ.
लिपजिग गाडिहरु गर्न ब्रेमेन
बर्लिन लिपजिग गाडिहरु गर्न
हानोवर लिपजिग गाडिहरु गर्न
हैम्बर्ग लिपजिग गाडिहरु गर्न
पश्चिम राइन रेलवे युरोपेली ट्रेन यात्रा, जर्मनी
सबैका लागि जो रसीला प्रेम, नकआउट सौन्दर्य, महल, र सूर्यास्त दाखबारी bathed, तपाईं जहाँ जान गर्नुपर्छ राइन नदी साथ यो सुंदर खण्डका छ. बीच रेल सवारी जर्मन शहर कोलोन र मेन्ज तपाईं सदासर्वदा सम्झना छौँ छ. यसको तस्वीर-सिद्ध परिदृश्य तपाईं सास फेर्न नसक्ने छोड्न हुनेछ! साँचो romantics जो खुसी अन्त र कहानी जादू विश्वास मार्फत हेर्न आकर्षक महल पुजा गर्नु हुनेछ हरियो दाखबारी. पश्चिम राइन रेलवे को "रोमान्टिक राइन" यात्रा को भाग रूपमा विश्वव्यापी जानिन्छ, त्यसैले तपाईं कोही भयो भने तपाईं साथ ल्याउन प्यार, तेसो गर. तपाईं एउटा अविस्मरणीय समय छौँ, त्यस्तै धेरै अरूले जसले वेस्ट राइन रेलवेलाई आफ्नो युरोपेली रेल भ्रमणका भाग बनाए.
लियोन, The French European Train Tours
सुन्दर लियोन मा तेस्रो ठूलो शहर हो फ्रान्स र देश को साँचो गतिशील केन्द्र. यो निश्चित छ एक थप liveable र तनावमुक्त गन्तव्य राजधानी भन्दा, हरेक कुनामा मनोरञ्जन भेटी. लियोन यो सबै छ: संग्रहालयहरु, रेस्टुरेन्ट, बुटीक, र मूल पसलहरूमा, साथै एक बारहरू र क्लबहरू को ठूलो संख्या. यो पनि एक हो जीवंत विश्वविद्यालय शहर, राम्रो आफ्नो युरोपेली रेल यात्रामा एक यात्रा लायक. सुन्दर भवनहरु को Rhone नदी अनदेखी, ठूलो पार्क, र वातावरण विभिन्न फ्रान्सेली सांस्कृतिक प्रभाव घमण्ड - छैन प्रेम के?
मार्सिलेज देखि ल्योन हाईस्पिड ट्रेन
एम्स्टर्डम देखि ल्योन हाईस्पिड ट्रेन
[https://www.youtube.comwatch?= यो mozmhlEKk0E
कुनै युरोपेली रेल पर्यटन टस्क्यानी को सुरम्य परिदृश्य मार्फत चढेर बिना पूर्ण छन्. केन्द्रीय इटाली प्रस्ताव मा यस क्षेत्रमा मनोरम ठाँउहरु र तपाईं बिल्कुल भ्रमण पर्छ चासो एकदम केहि अंक प्रदान. माइकलएन्जेलो सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुनर्जागरण कला देखि र Botticelli को Apennines मा आमा प्रकृति गरेको उत्कृष्ट काम गर्न, टस्क्यानी भव्य छ. राम्ररी योजना रेल टुर Tyrrhenian समुद्र तट साथ तपाईं लिन सक्छ, वा तपाईं को famed दाखबारी हेर्न दिनुहोस् Chianti.
मिलान Chianti Castellina गाडिहरु गर्न
फ्लोरेन्स Chianti Castellina गाडिहरु गर्न
नेपल्स Chianti Castellina गाडिहरु गर्न
रोम Chianti Castellina गाडिहरु गर्न
एक ट्रेन सेव तपाईं आफ्नो गन्तव्यमा रेल बुक गर्न मद्दत गर्छ3मिनेट, सस्ता दर मा र obnoxious बुकिंग शुल्क को राहत!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-european-train-tours%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#travelfrance #travelspain रेल यात्रा travelgermany यात्रा